Awoodda dabacsan ee Ingriiska iyo Khilaafka qoyska Reer Boqor! - Ahmed Abdihadi
Awoodda dabacsan ee Ingriiska iyo Khilaafka qoyska Reer Boqor!
MediaSociety and Culture
Hadda ka hor ayaa nin culumo ah oo dadka diinta u aqriya I waydiiyay sababta BBC-Soomaali dowladda ingriisku lacag badan ugu bixisaa- calashaan maxay ka faa’iidaysaa?
Jawaabta su’aashaas ma aqoonin maxaa yeelay arrimaha culuumta bulshada, gaar ahaan cilmiga siyaasadda iima billownayn.
Shaly oo marka su’aasha la I waydiiyay ay ka soo wareegtay 13 sano ayaa nin aan saaxiib nahay annaga oo Hoteel Safari(Moqdishu) Fadhina I waydiiyay sheekada la xiriirta Reer boqorka Ingriiska oo dood ku saabasan arrin qoys la xiriirta ay ka taagantahay.
Sheekadan wuxuu ka dhagaytay BBC-da. Kaligii ma ah ee qaybo badan oo adduunka ah ayay xiisa badan ka leedahay sheekadan.
Sheekadan adduunkan xiisaha ka leh oo la mid ah arrin Afgooye oo kale dhacday markii aad Xamar joogto ama Madaxtooyada Hargaysa oo kale markaad Hargayso joogto waxay ku timid baahinta awoodda dabacsan ee Ingriiska oo qarniyaal soo socotay.
Awooddan dabacsan(Soft power) waa qayb ka mid awoodaha uu dal yeesho si uu adduunka saamayn ugu yeesho.
Ingriisku waa dalka koobaad ee dunida dhinaca awoodda dabacsan. Awood dabacsan waxaa lagu gudbiyaa Saxaafadda, filimada, waxbarashada, iyo diblamaasiyada. Laakiin habka ugu saamaynta badan waa saxaafadda.
Marka su’aashii 13 sano ka hor la I waydiiyay jawaabteedu waa sidan: sababta Ingriisku BBC-Soomali lacag badan ugu bixinayo waa in awoodda dabacsan ee ingriisku dhex degto quluubta Soomaalida. Markaasna ay ka walwalaan khilaafka qoys reer boqor si la mid ah qoyskooda oo kale!
In Markii Ingriiska la maqlo wax weyn kula noqdo. Maskaxadaad iyo qalbigaaga ayaa la dhex degay adiga oo aan ogayn.
Dhinaca Soomalida, wiil aan saaxiib nahay oo dalka Japaanka cilmiga dhaqaalaha ka barta ayaa iiga sheekeeyay wax Japaanku Soomalida ka aaminsanyihiin.
Waxay daawadeen Filinka Captain Philips la yiraahdo oo laga matalay burcadbadeedda Soomaalida. Marka, qofka Japaan jooga aad ku tiraahdo Soomali ayaan ahay, waxaa ku soo dhacaya in aad burcad badeed tahay. Kaaf iyo kala-dheeri soo ma ah!
Falanqayn ku saabasan hannaanka doorashooyinka Galmudug
xoogga Hannaanada siyaasadeed: Tusaalaha Galmudug